နားဦးတည့်ရာ သုံးဆယ့် ရှစ် – “Bon Jovi” vs “ထွဏ်းထွဏ်း” (“I’ll be there for You” vs “မရှိတော့ဘူး”) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ သုံးဆယ့် ရှစ် – “Bon Jovi” vs “ထွဏ်းထွဏ်း” (“I’ll be there for You” vs “မရှိတော့ဘူး”)	7
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 28, 2015 in Music |7comments
လိုတာ ကို တောင့်တ ရင် အလွယ်လေး နဲ့ ပြည့်တတ် တဲ့ ဇာတာပါလေသလား။ :-))
မနေ့ကတင်ဘဲ ထွဏ်းထွဏ်း သီချင်း တွေ ကို ပြန်နားထောင်တော့ “မရှိတော့ဘူး” ဆိုတာ ကိုလဲ နားထောင်ခဲ့သေးတယ်။
အဲဒါလဲ ကော်ပီ သီချင်းပါဘဲ။
မူရင်းက ဇီချစ်သော “Bon Jovi” ရဲ့ “I will be there for you” သီချင်း ပါ။
Bon Jovi ကလဲ American rock band ပါဘဲ။ (Boy Band လို့ အလွယ်မပြောရဲ တော့ပါဘု။)
လိဒ်ဂီတာသမား ဘွန်ဂျိုဗီ ရဲ့ အမည်ယူထားတဲ့ အဖွဲ့ ပေါ့။ ဒီ အဖွဲ့ကလဲ ဘုရားသီချင်း တွေ လဲ တော်တော်ဆိုတယ်။
၁၉၈၃ က စတာ အခုထိလဲ နာမည်ရှိ နေတုန်း ဆိုတော့ အတော်လေး ပါရမီထူးတယ် ခေါ်ရမယ်။ သူ့ကြည့်ရတာလဲ အတော်လေး ကြည့်လို့ ကောင်းသေးတယ်။
ငယ်တုန်းက အရီး မောင်လေး များ ဒီ သီချင်းတီးပြီ ဆို “I’ll be there for you These five words I swear to you ” ဆိုတာ ကို လိုက်ပြီး ဝင်အော် နေကျ သီချင်း။
သူတို့ ဂီတာတီးတော့ လိုက်တီးသေးတယ်။
ကြိုးဖိတော့ လက်ထိပ်တွေ နာတာ ကို မခံနိုင်လို့ အလွယ်လေး နောက်ဆုတ်ပြီး ဆက်မတီး ခဲ့တာ ကို အခု နောင်တ ရ နေတယ်။
သီချင်းတွေလဲကြိုက်တတ်ခဲ့တယ်၊ တီးဖို့ တူရိယာလဲ ရှိခဲ့တယ်။ ကူပြီး သင်ပေးမဲ့ လူတွေလဲ ဘေးမှာ ရှိခဲ့တယ်။
ကိုယ့်လက်ကို အနာခံဖို့ စိတ်မရှိခဲ့ လေတော့ မတတ် ခဲ့ဘူး။
လက်ထိပ်မှာ အစွပ်လေးတပ် လဲ စမ်းတယ်။ မဖြစ်ပါဘူး။
မဟုတ်ရင် ဒီနေ့ မောင်ဂီ နဲ့ ပြိုင်ပြီး ကီးတွေ အကြောင်းကို ပြောနိုင်မှာ။
အခုတော့ ဒီအတိုင်းဘဲ ဗဟုသုတအဖြစ် ယူလိုက်ရတော့တယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါ ဆရာလေးဂီ။
. မေဂျာ တွေ မိုင်နာ တွေ နဲ့ နဲနဲတော့ ယဉ်ပါး လိုက်ပါသေးရဲ့။
ဒီ သီချင်း အကြောင်း သိသင့်သည်များ ကိုရော ဝင်ပြီး မျှ ပေးပါဦး။
ထွဏ်းထွဏ်း က ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး လုပ်သွားပြီ လားမသိ သူကြီး ရေ။
ဟိုးအရင်ကတော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် နဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းချင်း တူတယ် ပြောတာဘဲ။
. မောင်အောင် – အချစ်ရူး ရူး ဖူး မှ၊ အသဲကွဲဖူး မှ လူ ဖြစ်ရကျိုးနပ် မလားဘဲ။ ကိုမျိုး – ဒီခေတ်မှာ မိန်းကလေး တွေ က ဦးရေ ပိုများလာတာ ကလဲ တစ်ကြောင်းလို့ ပြောရ ပေမဲ့ ကိုရီးယားကား ယဉ်ကျေးမှု ရဲ့ လွှမ်းမိုးတာ ခံခဲ့ ရတာလဲ ပါပါတယ်။
. ယောကျာင်္းလေးတွေ ဘက်ကလဲ အလွယ်ရတိုင်း မယူသင့်ဘူး လေ။
တစ်ချို့ မိန်းကလေးများ က ရီးစားအပြိုင် အများကြီး ထားရ တာ ကို ဂုဏ်ထင်နေတာမို့ ကိုယ်က အတည်ကြံလဲ သူတို့ က မြဲမြဲတွဲချင်မယ်မထင်။
ဒီတော့ ဒီလို မျိုး မိန်းကလေးတွေ က ကိုယ့်ဆီ ကို ကပ်လာခဲ့ရင် စဉ်းစားပြီး မှ တွဲပေါ့။ မဟုတ်လဲ အသဲကွဲခံနိုင်ရင် တွဲပေါ့။
လူဆိုးလေး ကို ဘန်းပြပြီး အရင်ပို့စ် က မှတ်ချက် တွေ ကို ဒီ မှာ ပေါင်းတင်လိုက်တယ်။
အကြံအဖန် ကာလ မို့ ခွေးလွှတ်ကြပါ။ :-)))))
ထွဏ်းထွဏ်း – “မရှိတော့ဘူး”
ခုံမင်ခဲ့ဘူးတဲ့ အနမ်းတွေများစွာ ဆိတ်သုဉ်းကာ ပျောက်ကွယ်သွားပြီလား
ရင်ခုန်သံများနဲ့ အဆိပ်ပြေညတွေ မနက်လင်းမှ အချစ်တွေ ထပြန်သွား
မင်းမရှိတော့တဲ့ ရွှေရောင်မနက်မှာ အရာရာစိတ္တဇ ဖြစ်နေသလား
ဆုံးရှုံးခြင်း နဲ့ ဝေးကွာခြင်း မုန်တိုင်းကြီး တစ်ခု လို ကိုယ့်ရင်ထဲ
တိုက်ခိုက်ကြ သေကုန်ပြီ အကြင်နာအချစ်များ
အချစ်များ တည်နေရာတွေ ရွေ့ကုန်ပြီ
အားလုံး အားလုံး အရည်ပျော်သွား
နှုတ်ဆက် ထွက်လို့ သွားပြီလေ
အချစ်ရဲ့ အနှစ် ရဲ့ အရသာများ သွားပြီ မရှိတော့ဘူး။
အကြင်နာ အနံ့များ အခန်းငယ်ထဲမှာ
ဒါဏ်ရာတွေကို အချစ်က ထားခဲ့တယ်
အဆုံးသတ်ကြည့်တော့ ကိုယ်ရူးပြီဘဲ ဟိုး
မြစပဲရိုး says: Words can’t say whatalove can do .. I’ll be there for you
I’ll be there for you .. These five words I swear to you
မြစပဲရိုး says: အားလုံးပျောက်ကုန်ပြီ မီးခိုးငွေ့အဖြစ်ကောင်းကင်ကို
အချစ်များ တည်နေရာတွေ ရွေ့ကုန်ပြီ .. သွားပြီ မရှိတော့ဘူး။
နှုတ်ဆက် ထွက်လို့ သွားပြီလေ .. အချစ်ရဲ့ အနှစ် ရဲ့ အရသာများ သွားပြီ မရှိတော့ဘူး။
ထွဏ်းး၂ ကို နားးထောင်မိရင် ဒီ သီချင်းးလည်းးမလွတ်လောက်ဘူးး မှန်းးမိလို့…
ဘွန်ဂျိုဘီ က ရုပ်ရှင် တစ်ကားးလားး ရိုက်ဖူးးသေးးးးး
မျက်နှာကျ ခောတော့ အသက်ကြီးးလည်းး မပျက်စီးးးး
@QUIL@ says: ဒါကျ slider သုံးထားတာဗျ…
မြစပဲရိုး says: ဝင်နားထောင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ကလေး နှစ်ယောက်။ :-))
@QUIL@ says: https://www.youtube.com/watch?v=1alrtO1d8D8
ဆားက ရစ်ချီကို ပိုသဘောကျသဗျ..
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ
အဲ့ဒီ သီချင်းကိုတော့ ကြိုက်ခဲ့ ဆိုညည်းခဲ့ဖူးသဗျ
ဒါလည်း စာသားလေးတွေကို ကြိုက်မိလို့ပါပဲ
ထွဏ်းထွဏ်းရဲ့ အသံနဲ့ သီချင်းတော်တော်များများကို မကြိုက်
.အဆိုတော်အဖြစ် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်မှ မရပ်တည်နိုင်ရင်